गाईको सेवा गर्ने गौशाला देशै भरी खोल्ने योजना छ - Hello Patrika
अन्तर्वार्ता • दिव्य सन्देश
गाईको सेवा गर्ने गौशाला देशै भरी खोल्ने योजना छ
नवरत्न दधिची श्री दधिमथी गौसेवा नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँले नेपालमा गौसेवाको कार्य गरी अरुलाई गौसेवाको कार्यमा प्रेरणा दिने कार्य गरिरहनु भएको छ । वीरगञ्ज ९, रामटोलमा जन्मनु भएका गौसेवक दधिचीले २०५३ सालमा काठमाडौं पशुपतिनाथ देखि भारतको राजस्थानको नागोर जील्लामा रहेको दधिमथी मन्दिर कपाल पीठसम्म पैदल यात्रा गर्नु भएको थियो । सबै प्राणी भित्र ईश्वर छन् भन्ने मूल आदर्श शिरोधार्य गर्नु भएका दधिचीले देशका सबै जिल्लामा गौसेवा आश्रम खोल्ने उदेश्य लिनु भएको छ । हाल काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–३, सुन्ताखानमा उहाँको श्री दधिमथी गौसेवा नेपाल नामक गौसेवा आश्रम रहेको छ । अब प्रस्तुत छ, गौसेवक नवरत्न दधिचीसँग गरिएको कुराकानीः–
गौसेवामा लाग्न कसरी प्रेरणा मिल्यो ?
गौसेवा धर्म भन्दा ठूलो धर्म अरू केही छैन भन्ने ठानेर मैले गौसेवा गर्न थालेको हुँ । म धार्मिक स्वभावको भएकोले मैले काठमाण्डौको पशुपति नाथको मन्दिर देखि भारत, राजस्थानको कुलदेवीको मन्दिर कदीमती कपाल पिठ, पुष्करक्षेत्रमा रहेको ब्रम्हाको मन्दिर सम्मको यात्रा पनि गरें । करिब १ बर्ष अगाडी राजस्थानका ब्रम्हचर्य आश्रमका मेरो गुरू सपनामा आउनु भएको थियो । गुरु प्रेरणाले पनि मैले गौसेवाको मार्गमा अगाडी बढेको हुँ ।
नेपालमा गौसेवाको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?
नेपालमा गौसेवाको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको छ । गौसेवामा मानिसहरूको त्यती चासो छैन । मैले गौसेवा अरूलाई प्रेरणा दिनको लागि गरिरहेको छुँ । जसबाट धर्मको पनि रक्षाहोस् र गौमाताको पनि प्राणको रक्षा होस् । अझ भन्नुपर्दा अहिलेको पिढींलाई पनि प्रभाव परोस् र उनीहरूले धर्म र गाईको महत्वको बारेमा जानुन् बुझन् ज्ञान पाउन् भनेर गौसेवा सुरू गरेको हुँ । गौसेवा गर्ने गौशालाहरु देशैका विभिन्न ठाउँमा स्थापना गर्ने मेरो लक्ष्य रहेको छ ।
यहाँ भएका गाईहरुलाई कसरी सेवा गरिरहनु भएको छ ?
मानिसहरूले गाईलाई समस्या मानेर हाम्रो गौशाला बाहिर ल्याएर छोडिदिन्छन् । यहाँ भएका गाईका लागि व्यवस्था भएका स्रोत नयाँ थपिएका गाईका लागि पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले उनीहरूलाई खुवाउनको लागि बेला–बेलामा सहकारीबाट ऋण लिएर, साथिभाईसँग ऋण लिएर, दाताहरुसँग हात जोडी बिन्ती भाउ गरी सहयोग मागेका छौं । गौसेवा आश्रममा भक्तजनहरुको संकल्प अनुसार गरिएको पूजा पाठबाट आएको दानले गौमाताहरूलाई खुवाउने गर्छौ । पहिले यहाँ ४०÷५० लिटर दुध पनि उत्पादन हुन्थ्यो तर केही मानिसहरूले बिगारेर गए । केही मान्छेहरुले निरुत्साहित गर्न खोजे पनि गौमाताको सेवा गर्ने प्रेरणा बढीरहेको छ । गौसेवा सामान्य नित्य कर्म जस्तो होईन । पुण्य आर्जन गर्ने, सेवामुलक काम हो । मलाई यस्तो पूण्य काम पूर्वजन्मको भाग्यमानीले मात्र गर्ने अवसर पाउँछ जस्तो लाग्छ । अहिले आश्रममा केही जटिल समस्याहरु छन् जस्तै गाई मरेपछि गाड्ने ठाउँको अभाव छ । पहिले गौचरणमा लगेर गाडिन्थ्यो तर अहिले त्यो पनि सबै लालपुर्जावाला नम्बरी जग्गामा परिणत गरिएकाले गाई मरे पछि गाड्न धेरै समस्या छ ।
गौसेवाको कार्यमा तपाईले कस्ता सहयोग पाईरहनु भएको छ ?
समाजसेवी तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका सहयोगी रामबाबु अधिकारी ज्यूले गौसेवाका लागि धेरै सहयोग गर्नु भएको छ । म उहाँप्रति आभारी छुँ । गौसेवाको लागि उहाँले हामीलाई धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ । सुन्ताखानको यो जमिन व्यवस्थापनका लागि पनि धेरै सहयोग गर्नु भएको छ । गौसेवाको यस पुण्य कार्यमा सहयोग गर्नु हुन सबै श्रद्धालुजनलाई सहयोगको अनुरोध गर्दछु । तपाईहरु यहाँ आएर गौसेवा आश्रमको प्रतक्ष्य निरिक्षण गर्नुहोस् । हामीलाई सरकारबाट ५÷१० रोपनी जग्गा गौसेवाका लागि प्राप्त भयो भने त्यहाँ व्यवस्थित गाईका गोठहरु बनाएर त्यसमा १००÷२०० वटा गाई पालेर, गाईको सेवा गरेर अरू मानिसहरूलाई पनि प्रेरणा दिन मेरो ठूलो इच्छा छ । गौसेवा धर्म हो । तर नाना प्रकारका लान्छना लाउनेहरु पनि समाजमा छन् । किन मानिसहरुले दुध दिएसम्म गाई पालेर थाके पछि बुढो भएपछि त्यसै छाडिदिन्छन् । साना बाच्छाबाच्छिहरुलाई दुध खान नदिएर सडकमा बेवारिसे छोडिदिन्छन् । गाईलाई अन्याय गर्नेहरु तिर किन उनीहरुको ध्यान जाँदैन ? तर भन्ने भन्दै गर्छन् । तर आफूले काम गर्दै जानुपर्छ ।
गौसेवाबाट कीता धार्मिक र सामाजिक महत्वको अनुभव भयो ?
हिन्दु सनातन धर्म अनुसार गाईबाट प्राप्त हुने दही दुध ध्यू, गोहुँत गोबर पूजा पाठ र अन्य कुनै पनि धार्मिक कार्यमा नभै नहुने महत्वपूर्ण सामग्री हुन् । हिन्दु सनातन धर्म अनुसार ३३ कोटी देवी देवता गाईको शरीरभित्र बास गर्छन् भनिएको छ । मैले गौसेवा गर्न थालेदेखि आफ्नो नित्य धार्मिक कर्म गर्न पनि छाडेको छु । किनभने गौसेवा नै सबैभन्दा ठूलो धर्म हो । सबै प्राणी भित्र भगवान्को बास हुन्छ र यसैमा भगवान् खुसी हुनुहुन्छ भने मैले बिहानै उठेर चण्डी पाठ पूजा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन र गौसेवामै म खुसी छुँ ।
मेरा छोराछोरी पनि गोबर सोर्ने यो मैले गरिरहेको कामलाई त्यही राम्रो मानिरहेको छैनन् । उनीहरू हाम्रो बुवाले किन यस्तो गोबरको काम गरेको होला यस्तो गोबरको काम नगरीदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन् । तर जति अप्ठ्यारो परिस्थिति आएपनि म यस काममा निरन्तर लागिरहेको छु । मैले गौसेवालाई देशै भरी फैलाएर अरुलाई पनि प्रेरणा दिने अठोट बोकेको छुँ ।
गौसेवामा धार्मिक समुदायको सहयोग कस्तो रहेको छ ?
समुदाय विशेषबाट मैले उल्लेख्य सहयोग पाएको छैन तर मारबाडी समाजबाट केही दाताहरुको सहयोग र प्रेरणा समेत पाएको छु । अन्य केही दाजूभाईहरूले पनि आफ्नो समय मिलाएर केही मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ तर जति यि सबै सुविधाहरु यहाँभएका गाईहरुका लागि पर्याप्त छैन । हामी सबै धार्मिक जनहरु, पशुपक्षि प्रेमिहरु मिलेर गाईको रक्षा ग¥यौ भने देशमा सुख शान्ति हुन्छ । गौसेवा र धर्मको जागृति ल्याउनु अहिलेको समयमा अति आवश्यक छ । देशको सुख शान्तिको लागि मैले यो काम गरिरहेको छु । यज्ञको संस्कृति पनि हराईरहेको छ । गौसेवाका साथै यज्ञशाला बनाएर धर्म र यज्ञको संस्कृति संरक्षण गर्नु आज चुनौति भईरहेको छ ।
गाईहरूले एकदम देवताको जस्तै स्वरूप देखाउँछन् । अहिले मसँग, ३५-४० वटा गाईहरू छन् जसको नाम फरक फरक राखिएको छ र तिनीहरूको नाम लिने वित्तिकै मलाई चिन्छन् र मेरो छेउ आँउछन् । कहिलेकाही उनीहरूको लागि खानेकुरा हुदैन उनीहरूको कानमा गएर भन्ने कुनै न कुनै भक्तदाता आएर पूजा गराउँछन्, दक्षिण दिन्छन् र गाईको लागि पनि खानेकुराको व्यवस्था भईहाल्छ । यो गाईहरुमा भएको दैविशक्तिको कपा हो जस्तो लाग्छ । गौसेवा गर्दा यो जीवन सार्थक भएको जस्तो लाग्छ ।
गौसेवा नै किन राज्नु भो ?
गौसेवा गरेबापत मलाई यती धेरै आत्मसन्तुष्टी मिल्छ की जसले गर्दा म सबै तनाब र रोगहरू मुक्त भएको महशुस गर्छु र मलाई यसैबाट मनमा शान्ति मिलेको छ ।
यहाँ मेरो काम गर्ने १ जना भाई छ । त्यो भाई पहिले कृष्चियन थियो । अहिले उसले कृष्चियन छाडी सनातन धर्ममा लागि गाईको गौसेवा गरिरहेको छ । जसबापत उसलाई गौमाताको आर्शिवादले सबै राम्रो भईरहेको छ, उसको आनीबानीमा परिवर्तन आएको छ र उसका सबै दुःख कष्ट रोगहरू हटेर गएको छ । त्यसैले जसले गौसेवा गर्छ उसको कुनैपनि दुःख कष्ट तनाव, ऋण सबै हटेर जान्छ र सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ ।
भविष्यमा गौसेवाका कस्ता काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?
मेरो योजना ७७ जिल्लामै एकएक वटा गौसेवाको सेवा गर्ने यहि दधिमती गौसेवाको शाखा स्थापना गर्नु हो । रामदेवजीको पतञ्जलीका उत्पादन जस्तै ठूलाठूला गौशालाहरु बनाएर गाईबाट प्राप्त हुने गहुँत, गोबर, दुध, दही, ध्यूबाट उत्पादनहरु निकाल्ने र त्यही कामबाट आएको फाईदालाई गौसेवामा लगाउने हो ।
हाम्रो धर्ममा गाईको धेरै महत्व रहेको छ । नेपालमा धेरै हिन्दुहरु भएकोले नेपाल गाईको संरक्षण गर्ने हिन्दु राष्ट्र पनि हो भनेर संसारमा चिनिन्छ । त्यैसैले हामीलाई सरकार वा अन्य कुनै निकायबाट साथ र सहयोग पायौ भने देशको ७७ जिल्लामा एक एक वटा शाखा खोली गौमाताको सेवा र रक्षा गरी नेपाललाई चिनाउने छौं । गौसेवा मार्फत पनि देशमा धार्मिक जागरण बढाउन सकिन्छ ।गौसेवामा लाग्न थालेपछि म मा यस्तो जागरण आईसक्यो की मेरो आफ्नो घर परिवार छोडेर गौसेवा गरौँ जस्तो लाग्छ । म बाट दिन यहाँ आईन भने मेरो मनमा नै नरमाइलो लाग्छ ।
म सानैदेखि नै ब्रम्हचर्य स्कुलमा पढेको हुनाले त्यही शिक्षालाई फैलाउन नेपालमा लागीपरेको छु । किनकी हाम्रो रितिरिवाज संस्कृति र परम्परालाई विदेशी संस्कृतिले खाई सक्यो । हाम्रा बच्चाहरू अहिले हाम्रो सनातन धर्म र यस अनुसार गरिने व्रतबन्धलाई मान्दैनन् । हामीले अंग्रेजी भाषा सिक्यौँ सिकायौ तर हामीले हाम्रा पिढीहरूलाई हाम्रो धर्म संस्कृति र परम्परा सिकाएनौ । हाम्रो विद्यालय, क्याम्पस जस्ता विद्याको मन्दिरमा समेत धर्म संस्कृति र परम्परा पालना गर्नुका साथै गौमाताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिईंदैन । त्यसैले धर्म संस्कृतिको संरक्षणका लागि गौसेवाका साथै अन्य धर्मसंस्कृतिको संरक्षणका कार्यहरु पनि गर्नु पर्ने आवश्यकता महशुष गरेको छुँ ।
अन्त्यमा, म के भन्न चाहन्छु भने यस दधिमती गौसेवा आश्रममा रहेका मान्छेहरुले त्यागेका, सडकमा अलपत्र पारेर छोडिएका दुब्ला, रोगी, बुढा गाईहरु यहाँ आश्रममा भएका गाईहरू बिरामी हुन्छन् मर्छन् । तर रोगी गाईहरूको उपचार गर्न, गाईलाई इन्जेक्सन दिन र गाई मरेपछि गाड्ने सम्मको सुविधा दिन हामीलाई धेरै गाह्रो भईरहेको छ । यसमा सरकारले हामीलाई औषधी उपचार, भेटेनरी डाक्टर र गाई मरेपछि गाड्ने सम्मको काममा सहयोग हुनसके हामी सरकारको ऋणि हुने थियौं ।
म सबैलाई हातेमालो गरेर एक जुट भएर गौसेवामा लागौ र गौसेवामा हामीलाई हजुरहरूको साथ र सहयोगको खाँचो छ भन्न चाहन्छुँ । गौसेवा नै ठूलो धर्म हो धार्मिक जनहरूलाई मेरो अनुरोध यहि छ ।
अन्त्यमा, सरकारी निकायहरूलाई म के भन्न चाहान्छु भने दधिमती गौसेवाले गरेको काममा आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्नुहोस् । देशका सबै जिल्लामा गौसेवाको शाखा खोली गौसेवा गर्ने कार्यमा सरकारी निकायबाट पनि सहयोगहोस् भन्ने आशा गर्दछुँ । यस विषयमा सरकारको पनि ध्यानाकर्षण होस् । यसबाट मेरो मनोबल बढ्नेछ । साथै सरकारबाट पनि सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछु । नेपालमा गौसेवा फैलियोस् । नेपालको गौसेवा विश्वमै उदाहरणीय होस् । जसले गर्दा नेपालको नाम विश्वमै फैलियोस् ।
जैन धर्ममा स्याद्वाद सिद्धान्त
श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य निश्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज आज नेपाल आउँने